I-China Abs casing 2000+ cycles life lithium ion battery 12V 100Ah nge-BMS Manufacturer and Supplier | LIAO
1. Isigaxa sepulasitiki se-12V 100Ah lithium ion battery pack sohlelo lwasolwandle.
2. Impilo yomjikelezo omude: Iseli yebhethri ye-lithium ion engashona kabusha, inemijikelezo engaphezu kwengu-2000 okuyizikhathi eziyi-7 zebhethri elihola phambili.
Isibonelo No. ENGY-F12100T
Amandla okuzisholo 100Ah
UMax. ukuqhubeka kokushaja okuqhubekayo 100A
UMax. okuqhubekayo ukukhipha njengamanje 100A
Isisindo 13.5 ± 0.3kg
Ubukhulu 342mm * 173mm * 210mm
Isicelo Okwezinto zasolwandle, ukufaka ugesi, ect.
3. Isisindo esincane: Cishe isisindo esingu-1/3 samabhethri e-asidi yomthofu.
4. Ukuphepha okuphezulu: I-LiFePO4 (LFP) uhlobo lwebhethri lwe-lithium oluphephe kunazo zonke olwaziwa embonini.
5. Amandla aluhlaza: Ayinakho ukudonswa kwemvelo.
Imininingwane Yezimboni Nezindaba
Eminyakeni yakamuva, isihloko sokuvikelwa kwemvelo sikhange ukunaka okwandayo. Izinhlobo zamandla emikhumbi zishintsha kancane kancane zisuka emandleni ezinsalela zasendulo ziye emandleni wekhabhoni ephansi. Isimo sokwenza ugesi sikhula kancane kancane, futhi sesiqale ukukhushulwa ngamandla futhi sisetshenziswe emikhunjini.
Imikhumbi kagesi inezinzuzo zokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza, ukungcoliswa okungatheni, ukuphepha nezindleko eziphansi zokusetshenziswa, futhi izindleko zazo zokusebenza ziphansi kakhulu kunemikhumbi kaphethiloli kadizili neye-LNG. Ngaphezu kwalokho, imikhumbi kagesi ilula ngokwakhiwa kwayo, izinzile ekusebenzeni kwayo, futhi inezindleko eziphansi zokuyigcina, okwenza izolungela izitayela zemvelo zesikhathi esizayo.
Imikhumbi kagesi idinga ukuthwala inani elikhulu lamabhethri, futhi inezidingo eziphakeme zokukhishwa kwebhethri, ukujikeleza, kanye nezindleko.
Mayelana nokukhethwa kohlobo lwebhethri, uma kuqhathaniswa namabhethri e-lead-acid, amabhethri e-lithium iron phosphate anezinzuzo ezisobala maqondana nokuphepha, ukuminyana kwamandla nokusebenza komjikelezo. Kodwa-ke, amabhethri e-lithium iron phosphate njengamanje asetshenziswa kakhulu emabhasini amasha kagesi nasezinkambeni zokugcina amandla. Amabhethri e-lithium iron phosphate asetshenziswa emikhumbi kagesi azobhekana nokuqinisekiswa kobuchwepheshe, adinga ukucaciswa okuqinile nezintengo eziphakeme zomkhiqizo.
Amabhethri wamandla e-lithium iron phosphate prismatic asebenza kangcono jikelele ngokuphepha, umjikelezo kanye nezinga yizona ezihamba phambili. Futhi njengoba inani lamabhethri e-lithium iron phosphate asetshenziswa emkhakheni wemikhumbi kagesi enyuka ngokuzayo, intengo yemikhiqizo izokhombisa ukwehla.
Ngokuzayo, ukuthambekela komkhumbi i-lithium battery kuzogxila ikakhulu ezikebheni zesikebhe, izikebhe zokubuka indawo, imikhumbi yangaphakathi nezwe, izimakethe zokudonswa kwamatheku emadolobheni asogwini eduze nomfula, njll. Eminye imikhumbi emikhulu naphakathi nendawo isebenzisa amabhethri e-lithium esikhundleni se-lead acid , ezosheshisa ukusetshenziswa kwamabhethri e-lithium emikhumbi.
Langaphambilini Uhlobo lwe-Bolt prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 iseli lebhethri lokunikezwa kwamandla nokugcinwa kwamandla
Olandelayo: Umkhiqizi waseChina 19 intshi rack mounting 48V 50Ah lithium ion battery (LiFePO4ezokuxhumana ngocingo